Hordhac: Barca vs Chelsea - Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Kulankaan Adag Ee Lugta 2aad Wareega 16 CL » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Hordhac: Barca vs Chelsea – Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Kulankaan Adag Ee Lugta 2aad Wareega 16 CL
Kooxda kubada cagta Barcelona, ayaa waxay garoonkeeda weyn ee aadka looga qeyliyay ee Camp Nou, ay ku qaabili doontaa dhigeeda Chelsea, caawa oo Arbaco, si ay ula dheesho lugta kooxda London, kasoo safartay labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League.
Lugtii koowaad kooxahaan ayaa waxay kusoo kala baxeen 1-1, taasoo la macno ah in aysan kala cadeyn mida usoo gudbi doonta wareega Sideed dhamaadka.
Barcelona, ayay dadku usaadaalinayaa inay soo gudbi karto, laakiin waxaa marag madoonta ah in Blues, wax walba laga filan karo, maxaa yeelay inayku guuleysteen sanad ciyaareedkii hore horyaalka Premier League, oo ah kan koowaad ee dunida loogu jecel-yahay.
Andres Iniesta ayaa si lama filaan ah wuxuu uga soo dhex-muuqday liiska ciyaartoyda Barcelona uga qeybgaleysa ciyaarta kadib shaki badan oo laga gelinayay.
Laakiin, lama hubo inuu macalin Ernesto Valverde kusoo bilaabi doona ciyaaryahankaan, mar sheekadaas wax looga weydiiyay shirka Jaraa’id ee ciyaartaan ka horeeya wuxuu ku jawaabay: “Waan arki doonaa hadii ay dhacdo Berri.
Lionel Messi ayaa sidoo kale lagu soo daray kadib markii ciyaartii ay Isbuucaan Malaga ku dubteen horyaalka Malaga uu ku seegay dhalashada wiilkiisa cusub, kaasoo lagu magacaabo Ciro, ahna cunugiisii saddexaad ee ALLE siiyo.
Valverde ayay macquul tahay inuu safka koowaad uu kusoo bilaabo Dembele kadib muuqaal ciyaareed fiican oo uu garoonka ka sameeyay kulankii Malaga
Dhinaca kale, Chelsea ayaa waxay kulankaan aysan heli karin Alvaro Morata, David Luis iyo magacyo kale oo waa weyn sababo ku aadan dhaawac ay qabaan.
Macalin Conte oo si gaar ah sheekada Morata wax looga weydiiyay wuxuu ku celceliyay in dheelitaanka Morata ay Dood ku jirto ayna arki doonan hadii uu dheelo.
Hogaamiyaha Blues ayay macquul tahay inuu kusoo bilaabo safkiisa koowaad, gaara ahaan waaxda weerarka ama Afka hore xidigihii uu soo xushay lugtii koowaad oo ahaa: Willian oo goolka udhaliyay, Pedro iyo Eden Hazard.
BARCELONA: Ter Stegan: Roberto – Pique – Umtiti – Alba, Iniesta– Busquets – Paulinho – Rakitic, Messi – Luis Suarez
CHELSEA: Courtois — Azpilicueta – Christensen – Cahill, Moses – Kante – Fabregas – Alonso, Willian – Hazard, Pedro
Saacadda: 10:45 [Caweysnimo, Waqtiga Geeska]
Hordhac: Besiktas vs Bayern Munich - Kooxda Reer Germany Oo Lug Kula Jirta Sideed Dhamaadka CL